Manameloka Ny Tandrefana Ho Mahabetsaka Ireo Mpitsoa-ponenana Ny Filohan’i Afrika Atsimo, Noho Izany ‘Tokony Hiatrika An’io Izy Ireo’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Oktobra 2015 4:44 GMT
Vakio amin'ny teny Español, polski, русский, English
Ireo mpitsoa-ponenana eo amin'ny lalamben'i Hongria mankany amin'ny sisintany Aotrisiana. Sary navoaka teo ambany fahazoandàlana Creative Commons, avy tamin'i Joachim Seidler.
Nanameloka ny tandrefana ny Filoha Afrikàna Tatsimo, Jacob Zuma, indrindra ireo mpikamban'ny OTAN, amin'ireo fahabetsahan'ny mpitsoa-ponenana tonga any Eorôpa.
Nandritra ny resany tamin'ireo diplaomaty avy any ivelany ao Afrika Atsimo ny Talata 15 Septambra 2015, nilaza izy fa nanokatra ny fahamaroan'ireo mpitsoa-ponenana ny hetsika ara-miaramila natao hanoherana ilay mpanao jadona teo aloha Muammar Kadhafi.
“Andraikitr'izy ireo io. Izy ireo no nahatonga io, tokony hiatrika an'io izy ireo,” hoy i Zuma.
Jereo amin'ny lahatsary YouTube eto ambany, nalefan'ny ENCA News, ny resaka nataon'i Zuma tamin'ireo diplaomaty:
Niantso ny hanekena ny fanjakana Palestiniana miainga amin'ny sisintany tamin'ny taona 1967 ihany koa i Zuma, nampitandrina fa tsy hisy fandriampahalemana maharitra mihitsy ao amin'ilay faritra raha mbola lavina ny zon'ireo Palestiniana hanana tany azy ireo. Any Syria, nilaza izy fa tsy tokony hisy hetsika miaramila mihitsy hanovàna fitondrana. Niantso ny hanasiana mpikambana maharitra avy amin'ny tanibe Afrikana ho ao anatin'ny Filankevi-pilaminan'i Firenena Mikambana ihany koa izy, sady manontany tena hoe nahoana “ny tanibe misy olona maherin'ny an-davitrisany” no tsy manana mpikambana maharitra.
‘Diso tsotra izao’
Tamin'ny fanamarihana fa nisy “ampahanà fahamarinana kely” tamin'ny kabarin'i Zuma, Peter Fabricius, mpanolotsaina momba ny fiarovana avy amin-ny Ivontoerana ho Fikarohana momba ny Fiarovana mitoetra ao Afrika Atsimo, anefa, nilaza fa “tsy mivelatra, midina ambany, mpanendrikendrika ary diso tsotra izao” io fandalinany io:
Tsy iadian-kevitra fa nandray anjara tamin'ny faharavan'i Muammar Kadhaf ny fidiran'ny OTAN an-tsehatra, ary noho izany ny fahabangan'ny fahefana izay nahalasa an'i Libya ho toerana tsy nisy fitondrana, nanome vahana ny mpanondrana olona, tsy nisy fanarahan-dalàna, nandefa mpifindra monina an'aliny avy ao amin'ny sisintaniny hankany Eorôpa.
Ary mifamadika amin'izany, nanao ny fivarotana olona ho asany ireo milisy Libiàna mpanohitra, mba hanangonam-bola hanohizana ireo tombotsoany manokana. Io no tena fototra lehibe nitondra tamin'ilay ‘fahamaroana’ tampok'ireo mpitsoa-ponenana nandeha tamin'io làlana io.
Tsy ho ‘nilamina tanteraka’ anefa na ‘nizotra tamin'ny tokony ho izy’ io talohan'ny fidiran'ny OTAN an-tsehatra, araka ny nambaran'i Zuma. Efa nitroatra tamin'ilay mpitondra azy mahery setra ireo vahoakan'i Libya. Ary raha ‘nandeha araka ny tokony ho izy ireo zavatra rehetra’ nahoana ary i Afrika Atsimo, Gabon ary Nizeria no nifidy ho an'ny Vahaolana 1973 an'ny Filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana ny taona 2011, nanome alalana ny fidirana an-tsehatry ny miaramila OTAN?
Sahala amin'ireo firenena ao anatin'ny OTAN, nanao izany i Afrika Atsimo satria izy natahotra hoe hanatanteraka ny fandrahonany ny hamono ireo mponina mpitroatra tany Benghazi i Kadhafi. Noho izany tokony holazaina ho nitondra anjara biriky kely tamin'ny kirizin'ny mpitsoa-ponenana Eorôpena ihany koa i Afrika Atsimo.
Ankoatra izay, sarotra ny hilaza fa manana andraikitra amin'ny fitosahan'ireo mpitsoa-ponenana maro izay tonga any Eorôpa ankehitriny ireo zava-nitranga tany Libya, araka ny nolazain'i Zuma. Tsy avy any Libya ny ankamaroan'ireo mpitsoa-ponenana. Avy any Syria ny ankamaroany, ankehitriny, ary – araka ny neken'ireo mpanoratra ny kabary – mitsoaka ilay ady any miaraka amin'ireo mpifahavalo mahery setra avy amin'ny andaniny sy ny ankilany. Tsy dia manana andraikitra amin'io ady io ny UE. Na amin'ireo toerana maro hafa izay niavian'ireo mpifindra monina maro, sahala amin'i Eritrea, na dia marina aza fa misy ireo firenena avy amin'ny UE sasany no mizara ny andraikitra tamin'ilay faharavàna tany Afghanistan sy Iràka, toerana roa hafa tena loharanon'ireo mpifindra monina.
‘Mitsangana manohitra ny jadon'ny Tandrefana’
Naneho hevitra manoloana ilay lahatsoratra momba ilay kabary ao amin'ny This is Africa, nanohana ny filazàna ny tokony handraisan'ny Tandrefana andraikitra i Buh Mai:
Sambany izao ianao niteny tsara hoe tokony handray andraikitra feno i Bretagne, Frantsa ary Amerika, satria izy ireo no nahatonga io olana io
Mahita fanantenana amin'ireo mpitondra any Afrika toa an'i Zuma, izay nijoro nanohitra ny “jadon'ny Tandrefana”, i Ngariwa Aba Stanley,:
Tsimoka fanantenana io hoe ireo Ray Afrikana ho an'ny neny Afrika, toa an'i Jacob Zuma, [Filoha Zimbaboeana] Robert Mugabe, [Filohan'i Kamerona] Paul Biya, [Filohan'i Guinée Equatoriale] Teodoro Obiang Nguema, [Filoha Kenyana] Uhuru Kenyatta sy izaho, ary ireo olom-bitsy hafa, ankehitriny, miteny sy mitsangana manohitra ny jadon'ny Tandrefana. Efa ela no nanala ny saron-tavoahangy tao Afrika ireo tandrefana, nivantana ary matetika isaky ny mihetsika. Tokony hatsahatra izany ANKEHITRINY!
Raha toa ka sady miombon-kevitra amin'ny fanadihadian'i Zuma, nanamarika ihany anefa i Marcus A Mitchell hoe nanao sonia ny Vahaolana 1973 i Afrika Atsimo, izay nanome alàlana ny hetsika miaramila tany Libya:
Marina ny azy… ary tokony ho toy izany no nataon'i Afrika Atsimo… tamin'ny Vahaolana 1973 ihany koa… samy tokony hanana anjara andraikitra daholo ireo firenena rehetra nanao sonia
Namerina izany fihevitra izany koa, nanontany i Mbalekwa Ronald Mthombeni :
Miteny amin'ny lela mivadibadika. Nandray anjara tamin'ny famonoana an'i Khadafi izy tamin'ny fanaovana sonia izay vahaolana izay. Tsy namaky ve izy nialohan'ny nanaovana sonia?
Naneso an'i Zuma i Tron, tamin'ny fanehoankeviny tao amin'ny Dispatch Live (tsy misy rohy ho an'ny fanehoankevitry ny isam-batan'olona):
Tiako ny fomba nitsanganan'i Zuma teo ary nandidy ny tany tontolo hoe ahoana no hitondrana ny firenen'izy ireo, raha toa ka ets ankilan'izany, tsy afaka mitantana io fireneny io akory i Zuma.
Mikorisa amin'ny ranomandry manify izy amin'ny fitsikeràny ny an'ireny firenena hafa ireny.
Nilaza izao i Kenneth Burns, mpaneho hevitra tao amin'ny Daily Maverick:
“Niaraka taminà tsikera toy ny felaka no nahatongavan'ny tany tandrefana, ary indrindra fa i Etazonia “mpanjakazaka”, raha toa ka noharahabaina ho toy ny “kintana mpitantana ny adintska” ny fomba fitantanan'i Shina.” Kanefa vao omaly, nitodika tamin'i Etazonia ny Ministeran'ny Fahasalamana mba hanampy an'i Afrika Atsimo amin'ny vaksiny BCG ho an'ireo ankizy, mba hiarovana azy ireo amin'ny Kohadavareny. Nilaza ny [Kongresy Nasiônaly Afrikana ANC, antokon'i Zuma] fa samy manana ny fandaharam-potoanany ny tsirairay noho ny tsy fahampian'ny tena fahaiza-mitarika.
Niampanga an'i Zuma ho mpihatsaravelatsihy i Joseph Brenner:
Manondro tànana ny mpanjakazaka tandrefana izy kanefa mitsambikina ao anaty fiaramanidina miaraka amin'ny kapoaky ny mpangataka eny an-tànana ho any amin'ny Fihaonana an-Tampon'ny ONU. Tsy hilaza ilay fanampiana ara-bola izay mitentina an-davitrisany maro nomena an'i Afrika Atsimo ho an'ny drafitra fampandrosoana toy ny VIH/SIDA, ny mpamono antsika lehibe indrindra.
Fotoana izao tokony hampiatoan'ny tandrefana ny fikorisàna amin'io onjanà heloka fotsy io, manome fiantràna no sady maneso ihany vantany vao mitodika ivoho. Mila mitombo i Afrika.
Nieritreritra i Lawrence Dahl fa nanao hadisoana lehibe i Zuma tamin'ny fitsikeràna ny tandrefana:
Ny resany tsy tia-“mpanjakazaka,” tsy tia-Etazonia, dia inoana tokoa fa hovidiantsika lafo amin'ny AGOA [lalàna Amerikana natao hanampiana ny toekaren'i Afrika atsimon'i Sahara ary hanamafy ny fifandraisana ara-toekarena eo amin'i Etazonia sy io faritra io]. Manao fahadisoana lehibe izy, saingy efa mahafantatra izany daholo ireo olona mazava saina rehetra.
Na tsy tia an'i Zuma aza i Pierre Potgieter, nieritreritra izy fa marina ny fandalinany:
Tsy tiako ilay rangahy, kanefa marina ny azy. Nanala ny zavatra iray hany nampifandaja ny toe-draharaha tao amin'ilay firenena ny fanafihan'i Frantsa sy OTAN an'i Khadafi. Nanao hadisoana mitovy amin'izay koa izy ireo tamin'ny fanafihana an'i Assad any Syria.
Farany, torohevitra kely avy tamin'i Erik Grobbelaar:
Amin'ny maha “mpitarika'”ny toerana iray mahafatifaty izay tsy dia milamina antsoina hoe Afrika Atsimo, tokony hitazona ny fanehoankeviny ho azy izy ary hanafantoka kokoa ny heriny ao an-toerana ….